Ndi A Ga-eji Robot Dochie Ndi ahia? | Martech Zone
Friday, July 14, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Senraj Soundar
Mgbe Watson ghọrọ onye mmeri Jeopardy, IBM jikọtara ọnụ na Cleveland Clinic iji nyere ndị dibịa aka ọsọ ọsọ ma melite ogo ziri ezi nke nchoputa ha na ndenye ọgwụ ha. N'okwu a, Watson kwalitere nka nke ndị dibịa. Yabụ, ọ bụrụ na kọmputa nwere ike inye aka rụọ ọrụ ahụike, ọ ga-adị ka mmadụ ọ ga - enyere aka ma melite nka nke onye na - ere ahịa.
Ma, kọmputa ahụ ọ ga-anọchi ndị ọrụ ahịa? Ndị nkuzi, ndị ọkwọ ụgbọ ala, ndị ọrụ njem, na ndị ntụgharị okwu enweelarị igwe igwe infiltrate ha n'ọkwá. Ọ bụrụ na 53% nke ọrụ ndị ahịa na- akpaka, na site na ndị ahịa 2020 ga-ejikwa 85% nke mmekọrịta ha na-enweghị mmekọrịta ha na mmadụ, nke ahụ ọ pụtara na ndị robot ga-ewere ọnọdụ ahịa?
N'elu elu nke amụma amụma, Matthew King, Chief Business Development Officer na Pura Cali Ltd, kwuru na 95% nke ndị na-ere ahịa ga-anọchi anya ọgụgụ isi n'ime afọ 20. The Washington Post nwere obere atụmatụ na a ihe na-adịbeghị anya ebe ha kwupụtara akụkọ 2013 University of Oxford nke na-ekwu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ndị na-arụ ọrụ ugbu a na United States nọ n'ihe ize ndụ nke iji akpaaka dochie anya ha n'afọ iri na-abịanụ ma ọ bụ abụọ - na-egosipụta ọnọdụ nchịkwa dịka otu n'ime ndị kacha nwee nsogbu. Ọbụna onye bụbu ode akwụkwọ nke Treasury, Larry Summers, kwuru n'oge na-adịbeghị anya na ruo afọ ole na ole gara aga, ọ chere na ndị Luddites nọ n'akụkụ na-ezighi ezi nke akụkọ ntolite na ndị na-akwado teknụzụ dị n'aka nri. Ma, wee gaa n'ihu ịsị, Amachaghị m nke ọma ugbu a. Ya mere, chere! Ndi mmadu kwesiri ichegbu onwe ha?
Olileanya, ọ bụ ihe gbasara ịrụ ọrụ ma ọ bụghị imegide. Ndị ahịa Einstein bụ usoro ọgụgụ isi (AI) nke jikọtara na mmekọrịta ọ bụla na ndị ahịa yana yana ndekọ ndekọ ndị ahịa ka ndị ahịa wee mara mgbe ha ga-ekwu ihe ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị. Salesforce azụrụ ụlọ ọrụ AI ise gụnyere, TempoAI, MinHash, PredictionIO, MetaMind, na Implisit Insights.
MinHash - ikpo okwu AI na onye inyeaka nwere aka iji nyere ndị ahịa aka ịzụlite mkpọsa.
ijeụkwụ - ngwa ọrụ kalenda smart AI.
Amụma - onye na-arụ ọrụ na ebe nchekwa ihe ọmụma na-emeghe igwe.
Imezu Ihe Nghọta - na-enyocha ozi ịntanetị iji hụ na data CRM ziri ezi ma na-enyere aka ịkọ mgbe ndị na-azụ ahịa dị njikere imechi azụmahịa.
MetaMind - na - eke usoro ihe omumu miri emi nke nwere ike ịza ajuju metụtara nhota ederede na ihe onyonyo n’usoro ezigbo ihe nke mmadu.
Salesforce abụghị naanị otu egwuregwu AI. Na nso nso a, Microsoft nwetara SwiftKey, onye mepụtara keyboard AI nke na-ebu amụma ihe ị ga-ede, yana Andlọ nyocha ụlọ, Onye Mmepụta nke AI kwadoro chatbot na teknụzụ ọrụ ndị ahịa, na Genee, AI nyere ike ịhazi usoro ihe.
Dị ka Matiu King kwuru:
Ndị a bụ ngwaọrụ niile nwere ike nyochaa mmetụta ndị ahịa na ozi email ma ọ bụ mkparịta ụka ekwentị, nke mere na ndị ahịa na ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa nwere ike ịmata etu ndị ahịa ha si enwe mmetụta na otu ha si emeghachi omume na ajụjụ ụfọdụ ma ọ bụ kpaliri ha. Nke a na - enye ndị na - ere ahịa ohere ịghọta etu esi eme mkpọsa ka mma site na ịchụkwado ndị mmadụ n’oge kwesịrị ekwesị site na iji ozi ziri ezi dabere na mmasị na omume onye ọrụ ahụ.
Mana, teknụzụ a niile ọ ga - eji dochie onye na - ere ahịa? Akwụkwọ akụkọ Washington Post na-echetara anyị ọrụ ahụ ritere uru n'akụkụ arụpụta ihe na narị afọ nke 19 na nke 20 yana ọganihu na teknụzụ. Yabụ, ma eleghị anya ọ ga-abụ okwu nke ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ n'akụkụ ndị robot iji rụọ ọrụ ahụ nke ọma.
Biko cheta ndị mmadụ na-azụta mmadụ belụsọ ma ndị na-azụ ahịa bụ ndị na-achọghị ịzụ ihe na ígwè ọrụ. Ma, n'ezie, ndị robots nọ ebe a ma ọ kacha mma ka gị na ha rụọ ọrụ ma ghara ịmehie otu ihe John Henry mere: Agbalịrị ịme karịa igwe ahụ, mee ka igwe ahụ nyere onye na-ere ahịa aka ịrụ. Mee ka igwe na-egwuputa data na onye na-ere ahịa mechie azụmahịa ahụ.
Tags: aiAmamịghe echichenkatamkpụrụ ndụ ihe nketaenweghị nghọtaOge ọkọchịMatthew KingmetamindmicrosoftminhashamụmaPura CaliNkwado ire ahịandị ahịaNdị ahịa Einsteinusoro ihe omumeodeakwụkwọ egoswiftkeyogeMahadum nke OxfordwandbWashington Post
Senraj na-eduga ndị ọrụ nchịkwa na Njikọ Kọntaktị kwupụta isi ihe mgbaru ọsọ nke "injinịa mma na nnukwu ọrụ ndị ahịa". Tupu ya na ConnectLeader, o hibere ulo oru oru oru ngwanrọ abuo nke oma nke were oru kariri ndi oru mmadu karie US ma mepee ngwa ahia nke ndi ahia. Senraj nwetara MS na kọleji Science Science (na nsọpụrụ kachasị elu) na Mahadum Massachusetts na BS na Electrical Engineering na Anna University, Chennai, India. Na 1992, Senraj natara ugwu 'National Technology Award' nke Onye isi ala India maka mbupụta kachasị mma na mba ahụ.
Ndebiri maka ozi ederede ọ bụla ị nwere ike ịchọ maka azụmaahịa gị